Ngaba ubusazi ukuba ungaba nobulumko ngaphandle kokutshisa isibane sobusuku ufunda? Ukuba kukho umgubo onokukunceda ukuphucula inkumbulo yakho okanye ukwenyusa ukuphaphama, ngaba ubuya kuyithatha?
namhlanje, iziyobisi, ikwabizwa ngokuba yi-nootropics, ziba yintandokazi kwabaninzi. Isizathu soku kukuba baziwa ngokuba ngcono kubomi bemihla ngemihla. Izibonelelo ze-nootropic zivela kwixesha elide lokuqwalaselwa, uxinzelelo ngakumbi, ukonyuka kugxilwe kunye nengqondo ephaphile.
Uya kuqaphela ukuba kukho abafundi abangalunganga kakhulu ekukhunjuleni kwaye baya kufuna ukufaka iimviwo zabo ngaphandle komzabalazo omninzi. Kwakhona, kukho abantu abanemisebenzi ekumgangatho ophezulu enezibalo eziphezulu abanokufuna ukugcina uxinzelelo oluphezulu imini yonke.
Ngaphezulu kwalonto, abanye abantu bayasebenzisa i-nootropics kunye ne-smart drug powder Ukulawula ukuphazamiseka kokusebenza kwemoto njenge-Alzheimer's, isifo seHunnington, iParkinson, kunye ne-ADHD. Kungenxa yezi zizathu onokuthi uqwalasele ukusebenzisa ii-nootropics ukuze uhlale phambili kwezinye.
Kwesi siqwenga, sitshitshisile phantsi i-15 ephezulu i-nootropic powders kwaye yintoni ebangela ukuba babonakale.
Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo ze-nootropics
Kwixesha elidlulileyo, imboni yamachiza alumkileyo sele ikhulile, ngakumbi nangakumbi kunangaphambili. Nazi iindidi ezintandathu ezinokuthi zenziwe i-nootropics;
Ezi zezinye zezincedisi zokuqonda ezisetyenziswa ngokubanzi ezithengiswa ngaphezulu kwekhawuntari. Into elungileyo malunga nabo yinto yokuba baphucula ukusebenza kwengqondo yomntu ngaphandle kokusebenza njengento evuselelayo okanye evusayo. Nangona oosonzululwazi bengekayiqondi indlela elisebenza ngayo ngokupheleleyo, kuthiwa bonyusa ukuhamba kwegazi kwaye ukusetyenziswa kweoksijini kuyinxalenye yengqondo.
Ngethamsanqa, ziyafikeleleka ngokulula njengoko unokuzifumana ngokulula kwi-intanethi. Kwakhona, zimbalwa kakhulu iimeko zeziphumo ebezingalindelekanga ezichaziweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngokwesiqhelo, uninzi lwamachiza kule klasi lusebenza kakuhle xa lusetyenziswa ixesha elide. Oko kuthetha ukuba ukonwabela izibonelelo eziphezulu, kuya kufuneka uzisebenzise iiveki ezininzi.
Nayo nayiphi na i-nootropic ethathwa ngokuba ye-herbal, i-organic, okanye yendalo yeyeklasi. Rhoqo, zihlala zizityalo kwaye zinika izibonelelo zendalo. Eli nqanaba leziyobisi lihlala likhethwa kuba likhuselekile ukulisebenzisa njengoko liqulathe imichiza yokufaka okanye imichiza.
Enye yeentsilelo eziphambili kukuba aziqokeleli i-punch xa kuthelekiswa ne-synthetic nootropics. Omnye unokuthi, ke, afune ukuthatha iidosi eziphezulu kakhulu ukuba afumane isiphumo esifanayo nezo zenziwe.
Iziphumo zeVitamin B
Njengoko igama libonisa, uVitamin B ufumana i-Vitot B zee-nootropics ezithathwe kwiiVithamini ze-B ukukhupha izibonelelo ezilungileyo. Zichaphazela amanqanaba glutamate, choline, kunye ne-dopamine kwingqondo, kwaye oku kubenza baluncedo kunyango lokuphazamiseka kwengqondo okuwohloka komzimba njenge-ADHD.
Ekugqibeleni, ezi zinto zisuswayo zisetyenziswa kunyango lokukhathala ngokwasemzimbeni nangokwengqondo kunye nasekuphuculeni ukugcinwa kwememori.
Ngokuqinisekileyo ukhe wafunda malunga nama-peptides ngaphambili. Zenzeka ngokwemvelo iimolekyuli zebhayoloji ezenziwe ngama-amino acid kwaye zidityaniswa yimixokelelwane yeekhemikhali esebenzayo. Nangona bengafikeleleki ngokulula, i-Noopept iyafumaneka kwi-intanethi nakwiivenkile. Iipeptides zomelele kwaye zibonise ukuphucula inkuthazo, inkumbulo, amandla engqondo, amandla okufunda, kunye nokuphaphama.
I-Choline ngokwendalo ifumaneka emzimbeni, kodwa ngamanye amaxesha sinokuba nengxaki yokunqongophala kwako. Ngenxa yoko, oku kukhokelela ekunciphiseni amandla okuqonda okwenza ukuba kuncitshiswe impilo yonke yengqondo. Ukuthatha i-choline nootropics kunceda ukwandisa ukuvelisa kwengqondo kwe-acetylcholine neurotransmitters.
Izongezo zeCholine zinokuzithabathela ngokwazo okanye kunye kunye neeflethi. Xa zihlanganisiwe kunye, zikhokelela kwinkumbulo eyonyukayo, amandla okufunda kunye nophuculo kwimood ngokubanzi.
Ii-ampakines zezona zininzi zeyona nootropics zinamandla zaziswe kutshanje. Basebenza ngokukhuthaza ii-glutamate receptors kwingqondo. Ngenxa yoko, zikhokelela kumanqanaba anyukayo e-glutamate, ethi yona iphucule ukufunda kunye nememori.
Eyona phawu i-nootropic iyonke: Eyona nto ibalulekileyo kwi-nootropic yokuphucula inkumbulo: Olona phawu lubalaseleyo kwimidlalo yeimbaleki:
Ucoceko≥98% Flmodafinil powder
Akukho kalo ★★★★
Purity≥98% iPowiracetam Powder
Purity≥98% iCarphedon powder
Isizathu sokuba siyicaphukise:
Isebenza kakhulu nakwidosi ezisezantsi.
Zimbalwa iziphumo ebezingalindelekanga.
Uya kuziva umphumo wayo ngaphakathi kwemizuzu engamashumi amathathu emva kokuyithatha.
Kukhokelela kumanqanaba okukhunjulwa okukhunjulwa ngokunceda ekwakheni imemori yexesha elide
Ayenzi ukuba umntu ahlupheke ngenxa yeziphumo ezininzi ebezingalindelekanga. okt, isiphumo se-euphoric
Ikhabela ngaphakathi kwiiyure ezingama-1-2 zokuyithatha
Inika isiphumo esibalulekileyo sokunyusa
Ukungena ngokukhawuleza emzimbeni
Amanqanaba encopho afikelelwa ngaphakathi kweyure yokusetyenziswa kwayo.
Nazi i-15 ephezulu ye-Nootropics Smart Drug Powder:
Eyona ipowder iyonke i-nootropic powder-Flmodafinil powder
Eyona nto ibalulekileyo kwi-nootropic yokuphucula inkumbulo-Pramiracetam
Eyona nto ibalulekileyo kwi-nootropic yentsebenzo-Carphedon powder
Eyona nootropic yokuphaphama-Adrafinil Powder
Eyona nto ibalaseleyo yokuphucula ubukrelekrele- Fladrafinil (CRL-40,941) Powder
Okona kuphakanyiswa kokunikwa ingqalelo- IHydrafinil (9-Fluorenol) Powder
Eyona ndawo isebenza ngokukhawuleza i-nootropic- i-Noopept (GVS-111) Powder
Eyona nootropic ye-neuroprotection-Nefiracetam Powder
Eyona nto iphambili yokuphucula ingqondo- i-Aniracetam powder
Eyona nootropic efanelekileyo kunyango lwesifo i-Alzheimer's- J-147 Powder
Eyona ndawo ilungileyo yokulwa ne-nootropic-Magnesium L-Threonate Powder
I-nootropic ehamba phambili ekukhuthazeni ukusebenza kwentliziyo- iNicotinamide Riboside Chloride powder
Eyona nootropic yonyango lweswekile-Galantamine Hydrobromide powder
Eyona nto ibalulekileyo kwi-nootropic ekulweni nomhlaza womlomo wesibeleko- iCompound 7P yomgubo
Eyona nto intle yokuqaqambisa i-glutathione- N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder
Thelekisa iidowdi ze-nootropic ze-15 ezilungileyo ze-nootropic ngo-2019
NAME YAMAXABISO IMIPHUMELA KUFUNYWA DOSAGE UBOMI OBULICLA
I-Flmodafinil powder 5 Ezimbalwa kakhulu 100-200mg ngosuku iiyure 12-15
Pramiracetam powder 5 Ezimbalwa kakhulu 600-1200mg ngosuku iiyure 5-6
Carphedon powder 5 Bambalwa 200-750mg ngosuku iiyure 3-5
Adrafinil powder 4.5 Bambalwa 600-900mg ngosuku iiyure 12-15
I-Fladrafinil powder 5 Kancinci akukho miphumo mibi 100-200mg ngosuku iiyure 6-7
IHydrafinil powder 4.5 Bambalwa 50-150mg ngosuku iiyure 6-8
I-Noopept popwder 5 Bambalwa 30-60mg ngosuku iiyure 3-6
Umgubo weNefiracetam 4.5 Ezimbalwa kakhulu I-600-900mg nganye iiyure 3-5
I-Aniracetam powder 5 Bambalwa 1500mg iiyure 1-2.5
I-J-147 powder 5 Ezininzi 20-30mg iiyure 1.5-2.5
I-Magnesium L-Threonate powder 5 Bambalwa 1500-2000mg iiyure 44
I-Nicotinamide Riboside Chloride powder 4.5 Ezimbalwa kakhulu 1000-2000mg iiyure 5.3
I-Galantamine Hydrobromide powder 4 eziliqela 4-8mg iiyure 7
7P umgubo 5 Bambalwa 5000mg iiyure 1-2
I-N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder 4.5 Bambalwa 5000mg iiyure 5.6
Eyona phawu iyonke ye-nootropic
1. Ucoceko≥98% Flmodafinil (CRL-40,940) umgubo 90280-13-0
Kumntu okhangela i-nootropic esebenzayo kakhulu ngaphandle kokupompa kakhulu kuyo kwinkqubo, emva koko i-Flmodafinil powder yinto efanelekileyo yokwenene. Kuluvuyo ukuyisebenzisa kuba i-Flmodafinil idosi efunekayo yi-100-200mg yohlulwe kabini yonke imihla. Ukusuka kuvavanyo lweFlododinil olunikezwe ngabasebenzisi, kuyacaca ukuba le nootropic iya kukwenza uzive kwaye ucinge njengomphathi ngokuthatha nje imali encinci.
Kuqinisekisile ukwandisa amandla okuqonda kunye nemveliso ngokwandisa inani le-histamine, i-orexin, glutamate, kunye namanqanaba e-norepinephrine. Ngaphandle kwaleyo isebenza ngokuthintela ukwaphuka kwe-dopamine emzimbeni.
Nangona iyeyona intsha emarikeni, yeyona nootropics ipowder efanelekileyo ngenxa yezibonelelo ezizayo etafileni. Enye yazo kukonyuka kokufunda kunye nokukwazi ukukhumbula.
Okwesibini, iyanceda kunyango loxinzelelo oluncinci ngokubuyisa imeko yesiqhelo yomntu. Ikwanceda kulawulo lwe-ADHD kunye nezinye iimeko ezinxulumene nengqwalaselo. Ukongeza, i-Flmodafinil iyaziwa ngokwandisa ukuvela, ukuphucula ukukhuthaza kunye nokugxila, kunye nokusebenza ngcono kwengqondo yomntu.
Xa uthelekisa iFlododinil vs. modafinil, amanqaku aliqela abalelayo, umzekelo, iziphumo zeFlmodafinil zimbalwa kakhulu xa kuthelekiswa nezo zeModafinil. Nangona bebonakala ngathi bayinto enye, ifomula yabo ebunjiweyo yahluke ngokupheleleyo, kwaye oku kwenza ukuba iFlododinin ibe-bioavava ngakumbi.
Ngokuphathelele kubume beFlododinil, kuxhomekeke kwilizwe osuka kulo. Umzekelo, ukuze uthenge i-Flmodafinil powder eCanada, awudingi mayeza, ngelixa uyifuna ukuze uthenge iFlmodafinil eYurophu.
Ukuba ucinga ukuba ungayithenga phi iFlmodafinil powder, ke akusafuneki ujonge phambili. Unokukhetha ukuthenga iFlmodafinil kwi-intanethi njengeyona ndlela ilula kunye nexabiso eliphantsi. Singumthombo osemthethweni we-nootropic powders apho ungathenga i-CRL-40,940 Flmodafinil powder.
Isebenza ngokutshintsha i-histamine, i-orexin, i-dopamine, i-glutamate kunye namanqanaba e-norepinephrine.
Umthamo ophakanyisiweyo yi-100-200mg ngosuku.
Sele ihlolwe kwizilwanyana.
Eyona nto ibalulekileyo kwi-nootropic yokuphucula inkumbulo
I-2 Purity≥98% yePramiracetam Powder 68497-62-1
Nokuba ungumfundi ofuna ukwenza iimviwo zabo zokugqibela okanye umdala ofuna ukugcina umba wabo ungwevu, ke ipramiracetam yeyakho. Yeyona nootropic ehamba phambili xa kugcinwa imemori eqinileyo. I-Pramiracetam yintsapho yohlanga kodwa inamandla angamaxesha angamashumi amathathu kunobuhlanga.
I-Pramiracetam powder isebenza ngokwandisa umyinge wokuthathwa kwe-choline kunye nemveliso ye-Nitric oxide kwingqondo. Izibonelelo eziphambili zePramiracetam zibandakanya; ukuphuculwa kokugxila kunye nokufumana kwakhona nakuphi na ukonzakala kwengqondo. Kuyanceda ekubuyiseni nasekuthinteleni i-amnesia.
Isitaki sePramiracetam sihlala sinomthombo we-choline wokulwa amanqanaba e-acetylcholine ancitshisiweyo kwingqondo kunye nokuphucula ukusebenza kwengqondo. Inokubekwa kunye neAdrafinil, Armodafinil, kunye neModafinil. Ukuthelekisa iPramiracetam vs.Phenylpiracetam, kuyacaca ukuba iPramiracetam ayizibangeli iziphumo ebezingalindelekanga njengokucaphuka, isicaphucaphu, kunye nentloko efana neyokugqibela.
Ukuba ucwangcisa ukuthenga iPramiracetam kwintengiso okanye kumgubo omninzi, ke unokuhlala uthembele kuthi.
Inokuqala ngokukhawuleza kwentshukumo.
Nikeza ukukhuthaza i-psycho ngaphandle kokukhokelela kwi-hyperstimulation.
Ixesha lokunyanga lifutshane.
Kuyinto enyibilikileyo amanqatha ngenxa yoko kutyiwa kunye kunye izidlo.
Eyona nto ibalulekileyo kwi-nootropic kwimidlalo yeembaleki
I-Carphedon sisiphumo esivela kwi-piracetam esineempawu ezahlukileyo kuphela nge-piracetam liqela le-phenyl eliqhotyoshelwe kuyo. Ngenxa yeli qela, i-phenylpiracetam powder dosage efunekayo ukunika umphumo ofanayo nePiracetam iphantsi kwaye ithathwa njengamaxesha angama-20-60 anamandla ngaphezu kwePiracetam.
Uninzi lophononongo lwePhenylpiracetam luchaza malunga nokusebenza kwalo ekonyuseni intsebenzo yeembaleki ngenxa yeziphumo ezikhuthazayo ezinikwayo. Inceda nabantu ukuba bamelane nengqele. Ezinye izibonelelo zibandakanya ukulawula isifo sokuwa, ukubetha, ukuphazamiseka kwememori kunye nokudinwa.
I-Phenylpiracetam ayifanele ithathwe ngexesha lokulala kuba inokukhokelela kuphazamiso lokulala. Kwakhona, kuya kufuneka uyithathe kabini ukuya kane ngeveki okanye kwimijikelezo ukukhusela umzimba ekwakheni ukunyamezeleka kwiziphumo ezivuselelayo.
Best nootropic yovuko
I-4 Purity≥98% ye-Adrafinil Powder 63547-13-7
Ukuba injongo yakho kukonyusa ukuvuka kunye nokunciphisa ukulala, kuya kufuneka uthathele ingqalelo i-adrafinil powder. Ubuninzi bohlolo lweAdrafinil lubonisa ukuba luncedo ekuncedeni umntu ukuba ahlale ephaphile ixesha elide. Ngokwe-Adrafinil Vs. Isiqingatha sobomi beModafinil, eyokugqibela inexesha elide. I-Adrafinil nangona kunjalo iguqulwa ibe yi-modafinil ngelixa umzimba usongeza kubomi bayo besiqingatha ngenxa yoko iziphumo ezihlala ixesha elide.
Ezinye iziphumo zeAdrafinil zibandakanya ukwanda kokugxila; ukuphucula amandla okufunda kunye nokuxhasa inkumbulo. Nangona kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa, ithathwa njengekhuthazayo ekhuselekileyo kuba ayibangeli uninzi lweziphumo ebezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nezikhuthazi.
Kungcono ukuthathwa ngamanzi okanye ijusi yesitrasi ngenxa yencasa ekrakra yeAdrafinil powder. Kuba kusemthethweni uninzi lwamazwe, ungathenga i-adrafinil powder online ngaphandle kwesidingo sokuyalelwa.
Umthamo ophakanyisiweyo umalunga ne-600-900mg.
The Iziphumo ze-adrafinilihlala iiyure ezili-12-15.
Ayifanele ithathwe yonke imihla okanye ixesha elide njengoko yakha ukunyamezelana.
Eyona nto ibalulekileyo yokuphucula ubukrelekrele
I-5 Purity≥98% I-Fladrafinil (CRL-40,941) Powder 90212-80-9
Ngaba ujonge into eza kukunceda ubhabhe uye kwizinto ezingaphaya kwento owakha waphupha ngayo? I-Fladrafinil powder lelona chiza lilungileyo ekwandiseni ukucaca kwengqondo kunye namandla. Isebenza ngokunqanda ukonakala kwe-dopamine kungoko kulawulwa iimpendulo zeemvakalelo, ukufunda, kunye nengqwalaselo.
I-Fladrafinil iyafana ne-modafinil powder ngokubhekisele kubume bayo kunye neziphumo ngumahluko kuphela wokuba yimolekyuli eyongezelelweyo ye-fluoride. Ukongezwa kwenza ukuba iFladrafinil ingeniswe ngokulula emzimbeni.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeFladrafinil zimbalwa, kodwa ubungqongqo babo bunokunyuka ngokusetyenziswa rhoqo. Ngethamsanqa, iyafumaneka ngokulula, kwaye ungathenga i-Fladrafinil kwi-Intanethi ukuba uyafuna.
The Idosi yeFladrafinilkufuneka ube malunga ne-100-200 mg ngemini.
The Iziphumo ebezingalindelekanga zeFladrafinilzenzeka ngokungaqhelekanga.
Iiphinda-phinda kabini kune-Adrafinil kunye neModafinil.
Eyona nto iphambili yokuphucula inkuthazo
I-Hydrafinil powder, ekwabizwa ngokuba yiFluorenol yi-dopamine reuptake inhibitor eneyona nto iphambili kuyo kukonyusa ukumamela. Ezinye izibonelelo zeHydrafinil zibandakanya amandla ephuculweyo engqondo, uxinzelelo olungcono kunye nokunciphisa ukudinwa.
Inkqubo ye-Hydrafinil yesenzo ikwabandakanya ukonyuka kwe-histamine, norepinephrine, kunye namanqanaba e-glutamate ukuphucula imeko yomntu. Xa uthelekisa i-Hydrafinil vs.modafinil bioavailability, i-Hydrafinil nootropic ibonakalise ukuba imfutshane.
Intengiso yayo ayilawulwanga ngenxa yoko unokuthenga i-Hydrafinil eluhlaza (9-Fluorenol) ngalo naliphi na ixesha ofuna ngalo.
Akubizi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye i-nootropics.
IHydrafinil ayichukumisi kangako ngenxa yoko kukuphendula okumbalwa.
The Iziphumo zeHydrafinilbacingelwa ukuba bacolile.
Eyona nootropic ibambe ngokukhawuleza
I-Noopept powder yi-nootropic yokwenziwa ngokubanzi ithathwa njengesongezelelo. Sisisiyobisi esisebenza ngokukhawuleza esisebenza ngokukhawuleza njengoko unokuziva sisiphumo saso kwimizuzu embalwa. Ukuba uyazibuza ukuba uNoopept usebenza njani, ndiza kukuxelela ukuba wenza njani. Indlela esebenza ngayo ibandakanya ukwanda kweekhemikhali ezimbini zobuchopho; NGF kunye neBDNF.
Izibonelelo zeNoopept zibandakanya ukuphuculwa kwenkumbulo kabani, ukucaca, isantya sokucinga, ukugxila, ukuzithemba, kunye nehlombe.
Isiphumo esibi kuphela seNoopept sisentloko esisisiphumo sokuthatha idosi ephezulu okanye ukusebenzisa iNoopept nootropic powder okokuqala. Uncedo lweNoopept kukuba kusemthethweni kwaye kulawulwa kuphela kumazwe ambalwa. Oko kuthetha ukuba ukuba ufuna ukuthenga iNoopept, kuya kufuneka uthathele ingqalelo imithetho yelizwe lakho. Ngokwenza oku, unokuxela ukuba uyafuna na ugqirha okanye hayi.
The Umthamo we-Noopeptyi-30-60 mg ngemini.
Kuyanyamezeleka kwaye kuza neziphumo ezibi kakhulu.
Ingqinwe kakuhle kakhulu nge-choline.
Eyona nootropic ye-neuroprotection
I-8 Purity≥98% i-Nefiracetam Powder 77191-36-7
Emva kokubethwa sistroke, izigulana ezininzi zixelwa ukuba zixhuzule, ezinokuthi zikhokelele ekonakaleni kwengqondo kunye nokulahleka kwememori. Ngethamsanqa, i-Nefiracetam ibonakalisile ukuba iyazikhusela ekuthinjweni. Ikwenza oku ngokulawula umqondiso we-NMDA othintela ukunyuka kwamanqanaba e-glutamate.
Elinye lamalungu amatsha e-racetam, kwaye ezinye izibonelelo zalo zibandakanya ukonyusa imeko, ukufunda, kunye nenkumbulo. Xa uthelekisa i-nefiracetam VS aniracetam, uninzi lokujonga kwakhona kwe-nefiracetam inika ingxelo yokuba ibangela ukuphucula okukhulu kwimeko yomntu.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeNefiracetam zimbalwa, ke ngoko zithathwa njengezikhuselekileyo kwaye ziyanyamezeleka.
Isiyobisi esinyibilikayo; ke, iidosi ezisezantsi zithanda ukusebenza ngakumbi xa kuthelekiswa nepiracetam.
INefiracetam iye yaqhubeka nezifundo zezilwanyana kunye nezifundo ezithile zabantu.
Idosi yi-100mg-900mg ngosuku, ethathwa kabini; Intsasa yokuqala ekuseni ngolwesibini kusasa.
Eyona nto iphambili engqondweni
I-9 Purity≥98% Aniracetam Umgubo 72432-10-1
I-aniracetam ye-smart powder yi-ampakine nootropic enamandla ngakumbi kune-piracetam. Kuthatha imbasa xa kufikwa kuphuculo lwengqondo kwaye isebenza ngokukhuthaza ii-AMPA receptors; Eyona ndawo ixhaphakileyo ye-CNS glutamate receptor. Ii-receptors ze-AMPA zidlala indima ebalulekileyo ekwakheni iinkumbulo nasekufundeni.
Ezinye izibonelelo ze-Aniracetam powder zibandakanya ukwanda kweengcamango, ukunciphisa uxhalaba, kunye nokwanda kwimbono. Iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa ezibangelwayo xa kuthelekiswa nepiracetam zenza ukuba zithandwe ngakumbi zingasathethi ngeziphumo zazo ezinamandla kakhulu kunekomityi yekofu.
Umgubo we-Aniracetam uphakamisa ubuchopho bomntu ngokwandisa ubuchwephesha obuvela kwingqondo, obusebenza njengesichumisi sobuchopho.
The Idosi ye-Aniracetami-1500mg yohlulwe kabini ngemini.
Umntu unokuziva ezi Isiphumo se-AniracetamImizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 emva kokuyithatha.
Eyona nootropic efanelekileyo kunyango lwesifo i-Alzheimer's
I-J147 powder yi-nootropic ephuhliswe ngo-2011, kwaye enokubuyisela umva ulahleko, kancinci okanye isifo se-Alzheimer's. Yeqela leqela le-phenyl hydroxide kwaye lithathwe kwicandelo le-curry ye-curry yesinongo.
I-J147 isebenza ngokunciphisa umsebenzi we-ATP synthesis kwi-mitochondria. Ngale nto, ikhusela iiseli ze-neuronal kwizinto ezinobungozi ezinxulumene nobudala. Olu phando luye lwangumphumo kubaphandi kuba uninzi lweziyobisi ze-Alzheimer zijolise kwiiplathi ze-amyloid kwiingqondo zezigulana ze-Alzheimer. Iziyobisi ze-Alzheimers khange zincede kakhulu emva kwayo yonke loo nto.
Kukho ukusasazeka kwezilingo ze-J147, kwaye ukuza kuthi ga ngoku kubonisiwe ukuba kuyasebenza kwaye kuthathwa njengokuzinza. Ngeziphumo zovavanyo ze-J147 ezithembisayo, kuyacaca ukuba i-J147 inokunceda kunyango lwe-Parkinson kunye ne-stroke.
I-J147 inceda kunyango lwezifo ze-neurogenerative.
Liyeza elilingayo elinepropathi yokulwa ukuguga.
I-J147 isebenza ngokubopha kwiprotein efumaneka kwi-mitochondria (iiseli ezinceda kwisizukulwana samandla).
Eyona anti anti nootropic
11 Ukucoceka %98% Magnesium L-Threonate Powder 778571-57-6
Wakhe wacinga ukuba amandla akho okuqonda anokuhlala ehambelana nokuba sele ukwaluphala? I-Magnesium L-Threonate powder yinto ekhethekileyo ye-L-threonic acid ye-magnesium ityuwa ezalisa i-magnesium kwingqondo yomntu, iyenze ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Enye yeefom ze-magnesium ezingafumaneki kwintengiso.
I-Magnesium L-Threonate powder nootropic isebenza ngokwandisa uxinano lwe-synaptic ejikeleze indawo yehippocampus efumaneka kwingqondo. Ngokwenza oku, kukhuthaza inkumbulo ende, emfutshane, kunye nokusebenza kubo bobabini nakwabadala.
Ukonyusa imeko ye-magnesium emzimbeni kunye nezakhono zabo zokuqonda.
Umthamo ofanelekileyo weMagnesium L-Threonate yi-1500-2000mg
Inceda ukuphucula ukukhumbula, ukunciphisa inkumbulo ngenxa yokuguga, kwaye ikwancede nasekudaleni iindlela ezintsha.
I-Magnesium L-Threonate yadalwa okokuqala ngabaphandi kwi-MIT eyayiquka neBhaso likaNobel.
Eyona nootropic ikhuthaza umsebenzi wentliziyo
I-12 Purity≥98% Nicotinamide Riboside Chloride powder 23111-00-4
I-Nicotinamide riboside Chloride powder yeyona nicotinamide adenine dinucleotide intsha kwimarike, eyisihambisi sevithamini. Uncedo olunalo kukuba kuguqulwa ngokulula kube yi-NAD + kube kanye emzimbeni xa kuthelekiswa nezinye i-NAD + zangaphambili.
I-Nicotinamide riboside I-chloride eninzi yehlisa umngcipheko wokugula sisifo sentliziyo ngokubuyisa utshintsho olunxulumene nobudala kwimithambo yakho. Ngokunyusa amanqanaba e-NAD +, kukho ukuncipha kubunzima, ukuqina okuza kuthi kwandise ubhetyebhetye.
Ezinye izibonelelo zeNicotinamide riboside Chloride zibandakanya ukunceda ukunciphisa umzimba, ukunciphisa umngcipheko womhlaza, ukunceda kunyango lwe-jet lag, kunye noncedo ekukhuthazeni ukuguga kwemisipha esempilweni.
Iziphumo ebezingalindelekanga azibalulekanga, kodwa ubungqingqwa bunganyuka ngomthamo ophezulu.
Iphakamisa amanqanaba egazi NAD + ukuya kuthi ga kuma-2.7 amaxesha.
Eyona nto ichanekileyo ye-Nicotinamide riboside Chloride dosage yi-1000-2000mg ngosuku.
Kukhuselekile ezimbalwa iziphumo zeNicotinamide riboside Chloride ezixeliweyo.
Eyona nootropic yonyango lwesifo seswekile
I-13 Purity≥98% Galantamine Hydrobromide powder 69353-21-5
Namhlanje, isifo seswekile yenye yeemeko ezikhokelela ekubeni abantu bahlupheke kwihlabathi liphela. Ngethamsanqa, le nto ine-nitrogen iqinisekisile ukunceda ukulawula isifo. Ikwenza oku ngokuphucula indlela yokubonisa i-insulin. IGalantamine Hydromide ikwanciphisa ukutyeba ngokwehlisa ukudumba, ukunganyangeki kwe-insulin, ubunzima bomzimba, kunye namanqanaba e-cholesterol.
Kwixesha elidlulileyo, lalisetyenziswa kunyango lobuthakathaka bemisipha kunye nemvakalelo, kunye nokudakumba kwemoto okuziswa kukuphazamiseka kwesistim ye-nervous system.
Olunye usetyenziso lweGalantamine Hydromide lubandakanya ukonyusa umsebenzi wokuqonda, ukunciphisa iintlungu zesifo samathambo, kunye nokuphucula iimpawu kubantwana be-autistic nakwisifo se-Alzheimer's.
Ifunyanwa kwiintyatyambo kunye neebhalbhu zekhephu laseCaucasian, iDaffodil, igcawu lesigcawu elibomvu, iGaranthus woronowii kunye neVoronov.
IGalantamine Hydromide ifakwe kakuhle, ine-bioavailability yomlomo eyi-90%.
Inceda kulawulo lwezifo ezinganyangekiyo ezifana neAlzheimer ngokuthi iphucule inkumbulo, ulwazi kunye nokukwazi ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
Eyona nootropic ilwa nomhlaza womlomo wesibeleko
I-14 Purity≥98% Dibanisa i-7P powder 1890208-58-8
Umxube we-7P powder ngumhlophe omhlophe ukuya kumgubo omhlophe owenziwe kwinto enye kuthotho lweekhompawundi ngenjongo yokuchonga i-thromboxane receptor antagonist inhibitors. I-nootropics ye-7P ye-powder ikhuthaza ukukhula kwe-gap-43 i-axon efanelekileyo ekhokelela kukhuthazo lokuvuselelwa kwe-axon kwi-vivo.
Icomputer ye-7P ibonakalise owona msebenzi uphakamileyo wokulwa ne-tumor yomlomo wesibeleko ngokuphucula ukwenziwa kwe-micost ngendlela yokuxhomekeka kwidosi.
Ezinye zezibonelelo ze-7P powder zibandakanya; ukwanda kokunxibelelanisa, unyango lomonakalo ohambelana nobutywala, kunye nokuthintela i-oxidation ejikeleze ingqondo. Ikwanceda ekuphuculeni imvakalelo yomntu kunye nokulwa nokudinwa.
Inyibilika kancinci emanzini kunye ne-ethanol.
Umthamo we-7P ophakanyisiweyo wethamo kufuneka ube malunga ne-5000mg.
Kuthatha iyure enye ukuya kwezimbini.
Elona glutathione elincedisayo
I-N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) yeyona fomu ye-ester ye-N-acetylcysteine ​​(NAC) apho i-esterification inegalelo ekunyukeni kwe-lipophilicity ye-NAC kungoko iphucula i-pharmacokinetics yayo. Eli nqaku longeza ukongeza ekufunxeni kwalo okuphezulu apho lifakwa khona kwiiseli ezikhokelela kutshintsho lwayo lube yicysteine ​​kunye ne-NAC.
Sisiphambuka se-GSH esine-bioavailability ephezulu kakhulu yomlomo. I-NACET isebenza ngokufaka endaweni ye-NAC njenge-arhente ye-mucolytic, njenge-antioxidant enxulumene ne-GSH, kunye ne-paracetamol antidote.
Kunyibilika rhoqo emanzini kunye nezinyibilikisi eziphilayo.
Ingena ngokukhawuleza kwiiseli emva kolawulo.
I-NACETiyanceda kulawulo lwezifo eziwohlokayo njengesifo se-Alzheimer's.
Yintoni ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuthenga ii-nootropics
Ukukhetha i-nootropic efanelekileyo kufuna uphando, kodwa kufanelekile njengoko ilungiselela iziphumo ozijongileyo. Nazi ezinye zezinto ekufuneka uzigcine engqondweni ngelixa ukhangela i-nootropic;
Ukuthatha i-nootropic kube kanye ngemini kwaye ulibale malunga nayo yinto uninzi lwabantu olunokukhetha ukuya kuyo. Kodwa kwinyani yokwenyani, ukufumana i-nootropic esebenzayo esebenza kunye nexesha lokuphumla dosage kunzima. Yiya ezo zinokuthathwa kabini okanye kathathu ngemini ukuze umzimba wakho uqhelane nomthamo ocwangciswe kakuhle usuku lonke xa kuthelekiswa nokuba nomthamo omnye wothukileyo.
Awufuni ukuthenga ii-nootropics ezingaphaya kohlahlo-lwabiwo mali lwakho. Kuya kufuneka ke ujonge ukuba zonke azifani kwaye neendlela zabo zokwenza izinto azifani. Ukwalindele ukuba uthenge ii-dosage eziphezulu ze-nootropics ezinezithako ezisemgangathweni ngexabiso lamantongomane. Ke ngaphambi kokuzinza kweyona ishibhile, qinisekisa ukuba ujonga ukuba wenza umsebenzi olungileyo. Oko akuthethi, nangona kunjalo, oko kuthetha ukuba udlula i-nootropics yakho; yiya kwizinto ezifanelekileyo.
Yonke i-nootropic inefuthe elibangelwa yiyo. Ukuba ufuna enye enokunyusa ukugxila kwakho, kukho eyenye. Kwelinye icala, ukuba ujonge ukulawula isifo se-Alzheimer, ke kuya kufuneka ufumanise eyona ilungileyo.
Kwakhona, ezinye zinokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezininzi xa kuthelekiswa nezinye. Akukho mntu ufuna ukwenza kakuhle esikolweni kuphela ukuze aphelise ukungaphumeleli kwesibindi. Emva kwayo yonke loo nto, impilo yakho iza kuqala, kwaye awufuni kuthatha into eza kukwenzakalisa.
Ngamanye amaxesha, umntu unokufuna ukudibanisa ii-nootropics ezimbini okanye ngaphezulu ukufumana iziphumo zokuqonda ezingcono. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele ukuba ayizizo zonke ii-nootropics ezikhuselekileyo xa zibekwa. Kwanje ngokuba zizitena ezaziwa ngokwandisa i-potency kunye nokunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga, ezinye zinokungakhuselekanga kuwe. Wena, ke, kuya kufuneka wazi izithako zazo nganye kunye nendlela edibana ngayo ngaphambi kokuba uzithenge ukuze zifakwe.
Enye into ekufuneka ujonge kuyo lixabiso lophando olwenziwe kwi-nootropic. Abanye basilela ukuxhasa uphando ngelixa abanye bengangavavanywa ebantwini. Kweli xesha, zininzi iziyobisi eziphucukileyo ezenziwe uphando ngokwanelisayo.
Ke iya kukhuseleka kuphela xa ukhetha imveliso ebonakaliswe ngokufanelekileyo kwaye iqinisekisiwe ukuba iyasebenza. Ngale nto, uqinisekiswa ngoxolo lwengqondo kunye nokuphepha inkcitho yemali ngokuthatha izinto ezinokulimaza okanye zingasebenzi.
Amanqaku amaninzi kuthethwe ngayo yonke imveliso ngabo bayisebenzisayo mandulo. Olu lwazi kufuneka luncede uzinze kokusemgangathweni kunye nokunciphisa ithuba lokuthenga i-nootropic engasebenzi. Yiya kwezo zinophononongo olugqibeleleyo kunye ezimbalwa ezingezizo.
Ngokubanzi, kuninzi ekufuneka uqaphele ngaphambi kokuchitha imali yakho kuyo nayiphi na i-nootropic. Ukufumana okungcono, kuya kufuneka ubeke amanqaku kuwo onke amanqaku anikiweyo ukusombulula eyona manqaku ininzi ukuba ayizizo zonke.
Izibonelelo zokusebenzisa i-nootropics
Yonke imihla, sifuna umda; into eza kusenza ngcono kunabanye. Ngaba ukhe wacinga ngaphandle kwebhokisi kwaye wakujonga ukusetyenziswa kwe-nootropics yenye yeendlela ezinokuthi zinike ubomi bakho inguquko?
Ukusetyenziswa kwe-nootropics kuza nezibonelelo ezininzi, kwaye ukuba awuziqapheli iziphumo ezibalulekileyo ngokusetyenziswa kwe-nootropic, ungadibanisa ezimbini okanye ngaphezulu ukubona iziphumo ezizodwa.
Apha ngezantsi ezinye zezibonelelo ze-nootropic;
Yongeza uxinzelelo lwakho
Ngaba ukhe ucinge ngenye into kangangokuba ude ulibale nomsebenzi osele unawo? Yinto eqhelekileyo, kodwa ngamanye amaxesha unokuziva ngathi unengxaki yokugxila kwinto enye ngeloxesha unengqokelela yeeprojekthi ezingagqitywanga kunye nemibono engaphekwanga. Ke ngoku wenzantoni?
Ukuthatha i-nootropics kungqine ukukunceda kuloo nto ngokukunceda ukugxila ngakumbi kunye nexesha elide. Emva koko, unokunika wonke umsebenzi ukuthobela oko kufanelekileyo nokuba uziva ngathi unezinto ezininzi engqondweni yakho.
Mhlawumbi ufunde isihloko esithile, usiqonda kakuhle kodwa ulibele yonke into kwanaphambi kosuku lovavanyo. Ayizukubangela ingxaki kwakhona; ukuthatha i-nootropics kungqineke kuluncedo kwimemori yabantu.
Kuphucula ukukhunjulwa komntu ngokuphucula kunye nokulungisa onke amanqaku enkumbulo yomntu kwaye ukhumbule kwakhona. I-Nootropics ikwaxhasa ukuphuculwa kweeseli zobuchopho kunye nokukhuthaza ukuqhagamshela kwee-neurons. Ngonxibelelwano oluphuculweyo, ukuqonda, kunye nokukhumbula ulwazi lweenkcukacha kuyaphuculwa.
Ukuphucula impilo yakho yengqondo iphela
Ingqondo yenye yezona zinto zibalulekileyo zomzimba. Ukusebenza kwayo, nangona kunjalo, kuchaphazeleka kukutya okungalunganga kunye neeshedyuli ezixakekileyo. Ngokusetyenziswa kwe-nootropics, awugcini kuphela ukuphucula imemori yakho, kodwa impilo yengqondo iphela iyaphucuka.
Oko kufezekiswa ngokwanda komjikelo weoksijini oya kwingqondo kunye nokugcinwa kweeseli kunye neeseli zengqondo, ezenza ukuba iingqondo zisebenze ngakumbi.
Phakamisa indlela ovakalelwa ngayo
Imozulu engcolileyo inokonakalisa usuku lwakho kwaye yenze ukuba ungazenzi imisebenzi yakho njengoko befanele ukuba kunjalo. Ngethamsanqa, kukho iimveliso ezikhoyo ezinokuphucula imeko yakho, zikwenze ube ngumntu owonwabileyo ngakumbi. I-Nootropics inokuzisa oku kukwenza ukuba ugxile kwaye ugxile kakhulu kwimisebenzi osenokuba unayo.
Umthi S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014). “IiPsychostimulants kunye nokuqonda: Pharmacol. ISityhi 66 (1): 193-221.
UFrati P, uKyriakou C, uMarinelli E, uVergallo GM, uZaami S, uBusardò FP (2015). “Iziyobisi ezikrelekrele zokuphucula ukuqonda kunye nokwakha umzimba :. Ikhonkco Neuropharmacol. 13 (1): 5–11.
IGiurgea, iCorneliu, (ngoJanuwari, 1977). "Iziyobisi zeNootropic". Inkqubela phambili kwi-Neuro-Psychopharmacology. 1: 235–247
1.Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo ze-nootropics
2.Thelekisa eyona 15 ilungileyo yeziyobisi ze-nootropic powders kwi-2019
I-3 yeyona nto iphambili ye-nootropic powder
I-4 yeyona nootropic ibalaseleyo yokuphucula inkumbulo
5.Iyona nootropic ibalaseleyo yokusebenza kwezemidlalo
6.Iyona nootropic ibalaseleyo yokuvuka
8.Ukukhuthaza ngakumbi ukukhuthaza
9.Iyona nootropic isebenza ngokukhawuleza
10 yeyona nootropic ilungileyo yokukhusela i-neuroprotection
11. Eyona nto iphucula ingqondo
I-12 yeyona nootropic ilungileyo kunyango lwe-Alzheimer's
13.Iyona nootropic ilungileyo yokuguga
14.Iyona nootropic ibalaseleyo ekukhuthazeni umsebenzi wentliziyo
15.Nootropic ebalaseleyo kunyango lweswekile
16.Iyona nootropic ibalaseleyo ekulweni nomhlaza womlomo wesibeleko
17. Eyona nto ibalaseleyo yokuqinisa
18.Yintoni ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuthenga ii-nootropics
19. Izibonelelo zokusebenzisa ii-nootropics
Matshi 24, 2020
Buy Fulkazil online uthi:
January 20, 2021 kwi 10: 19 am
January 21, 2021 kwi 4: 13 am